Ministira Muummee Abiy Ahimad: 'Adeemsa finxaalesummaa cimseen balaaleffadha' - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Muummee Abiy Ahimad adeemsa finxaalessummaa waldanda'uu aadaafi amantii hawaasa keessa ture faallaa deeman jedhan cimsanii akka balaaleeffatan himan.
''Itoophiyaa daandii badhaadhinaarra jirtu keessatti adeemsawwan finxaalessummaa waldanda'uu amantiifi aadaa waliin jiraachuu faallessan bakka hin qabani,'' jechuun fuula Feesbuukii isaanii irratti barreessaniiru.
Adeemsawwan akkanaa akka balaaleeffatan ibsuun 'lammiilee Itoophiyaa nagaa jaalatan hundaan waliin jireenya keessan akka cimsattan waamichakoon dabarsa,' jedhan.
Ergaan isaanii kuni guyyaa kaleessaa Naannoo Amaaraa Godina Goojjaam Bahaa magaalaa Mooxaatti manneen amantaa irratti haleellaan erga raawwatee booda kan dhagahamedha.
Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaafi Manni Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsa baasaniinis haleellaa manneen amantii irratti raawwate balaaleeffataniiru.
Guyyaa kaleessaa mana Kiristaanaa Qulqulluu Giyoorgis irratti sababa hanga yoonaa hinbeekamneen balaan ibiddaa kan mudate yoo ta'u hawaasnis walitti bahee dhaamsee ture.
Haa ta'u malee isa booda, namoonni walitti qabamuun gara masjiidotaa deemuun badii kana raawwatan jechuun Komishinii Poolisii Naannoo Amaaraatti ajajaan qajeelcha ittisa yakkaa Komaandar Jamaal Mokonniin BBC'tti himaiiru.
Haleellaa kaleessa galgala keessa raawwateen yoo xiqqaate masjiidonni sadii kan gubatan yoo ta'u suuqiileefi qabeenyi kaanis barbadaa'uun himameera.
Wanta guyyaa kaleessaa raawwate qondaaltonni mootummaa kaan balaaleeffatanis jiru.
''Haleellaa manneen amantaa irratti raawwatu balaaleeffachuuf nama ta'uun qofti gahaadha,'' jechuun Ministirri Geejjibaa Aadde Daagmaawwit Mogas fuula Feesbuukii isaanii irratti barreessan.
'Dhaabbilee amantaa bataskaanas ta'an masjiida gubuunis ta'e jigsuun gocha maaltu na dhibeeti' kan jedhan immoo Abbaa Alangee Federaalaa Obbo Birhaanu Tsaggaayeti.
Obo Birhaanuun mootummaaa kanneen kana raawwatan irratti tarkaanfii jabaa ni fudhata jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan.
Riifoormiin MM Abiy garaagarummaa sabootaa saaxile
Dhaabni siyaasaa Warraaqsa Biyyaalessaa Amaaraa [ABIN] ibsa baasenis ''...erga dhihoo as Naannoo Amaaraa keessatti manneen amantaa Musliimaa irratti haleellaan raawwatu dabaluun isaa yaaddessaadha,'' jedheera.
Mootummaan kanneen kana raawwatan seeratti akka dhiheessu gaafachuun manneen amantiis karaatti nagaa isaanii eeggachuu danda'an akka cimsatan ibseera.
Jiraattonni magaalaa Mooxaafi naannawaa ishii miiraan ka'uun qabeenya aantee ofiirratti haleellaa raawwachuun fudhatama kan hin qabne ta'u hubachuu qabu jedheera.
Minsitirri Muummee Abiy Ahimad erga gara aangootti dhufanii jijjiiramoonni hedduu galmaa'anis waldhabdeen sabaafi darbee darbee immoo kan amantii qormaata itti ta'aniru.
Ji'a tokko dura gama Baha biyyattii manneen amantii Kiristaanaa Ortodoksii irratti haleellaan raawwate manneen amantaas gubachuun isaanii ni yaadatama.
Boordiin filannoo gabaasa taajjabdootaa, komii paartilee siyaasaa fi ibsa KFO irratti ibsa kenne
24 Waxabajjii 2021
'Boordichi iyyatan dhiyeeffadheef deebii hin kennu taanaan mana murtiin dhaqa'